Naseho ny : 29 oktobra 2020
Fianarana mikabary moa no anton'ny fiaraha-misakafo. Tsy nijanona teo nefa fa niitatra tany amin'ny fanehoana ny antsipirian'ny fiainan'i Bary mpikabary, nanjary liana tamin'ny fifanakalozana traikefa amin'ny asa teo amin'izy sy i Dera.
Naseho ny : 19 aogositra 2020
Nanomboka teo, fianarana telo no indray nosahanin'i Dera : kabary, katekomena, toriteny. Namola-tena izy hiatrika ny zava-misy, satria izy ihany no nanao izay hisian'izany.
Naseho ny : 18 aogositra 2020
Nilaza tamin'ny rafozan-dahiny ny amin'ny fanapahan-keviny i Dera : hianatra hitoriteny. Faly ireto rafozany, tretrika i Vola tamin'izany.
Naseho ny : 15 aogositra 2020
Hafaliana lehibe no nasetrin'i Vola ny fanirian'i Dera hianatra kabary. Vao nanomboka niatrika ny fampianarana izy dia nosedraina tamin'ny famerenana izay tadidiny tamin'ny momba ny fanombohana kabarim-panambadiana.
Pejy 1 amin'ny 66